Rose - KathaHamro
रोज Chapter 2
सब कुरा समयअनुसार नै थियो । ढिलो त म उठेको थिएँ । एक झाँक्का हावा आँत नै ठिहिर्याउने गरी प्रहार गरेर त्यहीँ बेपत्ता भयो । कफीको तलतल लाग्यो । फ्रेस भई किचेनमा गएर एक कप स्ट्रङ्ग कफी बनाएँ र रुममा आएर मोबाइल हेरे ।
मोबाइलमा देखेँ( २० मिस्ड्कल, सेभ नगरिएको नम्बर ।
कलब्याक गर्न ब्यालेन्स थिएन । मोबाइल टेबलमा छोडेर ओछ्यान मिलाएँ । घडी हेरेँ । ९ बज्न लागिसकेको थियो । झ्यालबाट चिहाएँ । केटाकेटीहरु स्कुल जान हिड्दै थिए । अफिस जाने मानिसहरु बाटोभरि देखिए । फोनको रिङ्ग बज्यो ।
सेम..... सेभ नगरिएको नम्बर ।
रिसिभ गरेँ ।
‘हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ ?’
‘गेस गर्नुस्, को होला ?’
‘अहँ, चिनिनँ । के हामीले यसभन्दा पहिले कुरा गरेका थियो ?’
‘प्रयास गर न !’
‘सरी ! मैले चिनिनँ ।’
‘म बिमला । कस्तो आवाजपनि याद नगरेको ! म त तिमीले जुन नम्बरबाट कल गरे नि चिन्न सक्छु ।’
‘अँ ! त्यस्तो ट्यालेन्ट कम मान्छेमा मात्र हुन्छ । तैपनि प्रत्येकचोटि नयाँ नम्बरबाट कल गर्छौ । मलाई ठम्याउनै गाह्रो पर्छ ।’
‘आज कलेज किन आएनौ ?’
‘निन्द्राले छोडेन ।’
‘धेरै केरिङ्ग छ जस्तो लाग्यो ।’
‘तिम्रो निन्द्रा ! तिमीलाई छोडेन भनेको हैन ।’
‘हो । खाना खायौ ?’
‘छैन । तिमी कलेज आएनौ आज । मलाई बोर लागेको छ । अनि म्यूजिक क्लास नि जान मन छैन ।’
‘बिमला, के प्रोब्लम भयो ?’
‘आज अफिस लिभ होला । मेरोमा आउन । खाना मेरेैमा बनाउला । बिमला के.सी. । यो नामसँग म केही महिनादेखि जोडिएको छु । यसरी जोडिएको छु जसरी कसैकी प्रेमिका उसको प्रेमसँग जोडिएको होस् ।सायद जीवनमा साथीको कमी उबाट पुरा भएको छ । अनि यस्तोमा के ऊसँग लगाव हुनु जायज होइन ?
तर जति नै नजिकको सम्बन्ध भएतापनि कसैकोमा गएर खाने मेरो बानी छैन । त्यो कुरा नि अब उसकोमा गएर लन्च गरेपछि बद्लिने छ ।
घरमा खाना पाकी सकेको थियो । हाम्रो नेवारजातिको चलनअनुसार पाकेको खाना जुठो मुखभए नि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । नत्र अशुभ मानिन्छ । त्यसैले खाना खाएर निस्के ।
स्कुटी चलाइ रहँदापनि म उसको बारेमा सोचदै थिएँ । एक्लै केटीमान्छे काठमाडौंजस्तो सहरमा कसरी म्यानेज गरिरहेकी छे ? चिनेजानेको, आफन्तइष्टमित्र पनि नभएको अवस्थामा, केही परि हाले हेल्प गर्नेपनि कोही छैन । यस्तोमा उसको साथी म मात्र हुँ । सोचैसोचमा उसको डेरानिर पुगेको होस् भयो ।
मैले हर्न बजाएँ । उनी बाहिर निस्किनन् । सायद बिमला खाना पकाउन थालिन् । स्कुटी साइड लगाएर म उसको रुमतर्फ लागे । ढोका नक् गरे ।
‘खुल्लै छ भित्र आउ ।’
जब ढोका खोले तब आँखा अगाडिको दृश्यले मनमा चिसो पस्यो ।
‘कति लेट गरेको, म कुरिरहेको थिए ।’
निशब्द भएको मेरो ओठले बोल्ने आट गरेन ।
‘बस न कि घर मै छोडेर आयौ ।’
‘उ किरण, मेरो एक्स । उसको घर डिल्लीबजारमा छ । शङ्खमूलमा पनि छ र उ नेवार हो । म बिरामी भएर हेर्न आएको हो । अलि सन्चो हुन्छ भनेर मसाज गर्दिरहेको छ । तिमी बस न । के भयो ? म कपडा लगाउँछु । अनि हामी बाहिर नै केही खाउला । आज खाना बनाउने मन छैन ।’
‘मन थिएन भने मलाई किन बोलाएको त ?’ भन्नु थियो तर म हस् भनी उनीहरुको चर्तिकला हेरिरहे ।
‘एक्स्क्युजमि ।’ म कोठाबाट बाहिरिएँ । लामो श्वास ताने । बिमलासँग रिस उठ्यो । के यै देखाउन मलाई बोलाएको हो ? एकछिन् त लाग्यो उसँगको अन्तिम भेट हुनेछ । फेरि सोचे उसलाई बुझ्न जरुरी छ । मैले बाहिरै वेट् गरे । करिब आधा घण्टापछि उनी टपस् मिलाउदै निस्किन् ।
उनी अलि फरक देखिएकी थिइन् । सायद, मेकअपले होला । कालो रङ्गको ब्याकलेस् टप, ग्रन्च जिन्स र हाइ हिल्स्मा सजिएकी बिमलालाई देखेर कोही मर्द जातले अन्दाजा पनि लगाउन सक्दैनन् कि उनको पृष्ठभुमि कस्तो छ । किनभने काठमाडौंको मलमा पाइने महंगा कपडा, जुत्ता र अनुहार नै चम्काउने पाउडरले उनलाई कुनै सुपरमोडल जतिकै आवरण दिन्थयो । म एकतक भएर उनलाई नियालिरहे ।
‘निस्किन लागेको, रोज ?’
बिमला मभन्दा अगाडि भर्याङ्ग तल जादै थिई । ‘अ, म गएँ ।’
‘भरे सिधै घर आउ है । ममीबुबा पार्टीमा जानुहुन्छ । म एक्लै हुन्छु ।’
म बिमलाको ढोकानिर उभिएको थिएँ । उनीहरुबीचको कुराकानी बुझ्न सकिन । बिमलालाई रोज नामले बोलाएको त झन् अनौठो लाग्यो । आखिर बिमला कसरी रोज बनिन् जान्न मनलाग्यो । त्यो केटा हत्तारिदै बाहिर निस्क्यो । म हेल्मेट लिन रुममा पसेँ ।
‘रुम लक गर्देऊ है । चाबी विन्डोनिर छ ।’ बिमलाको आवाज सुने ।
म चाबी खोज्दै विन्डोनिर पुगे । विन्डोबाट जुन सिन देखे आँखालाई विश्वास गर्नै गाह्रो भयो ।
किरण रिसाउदै हिड्यो । बिमलाको अनुहार नियाउरो थियो ।
‘कहाँ जाने ?’ मैले सोधेँ ।
‘जहाँ तिमी लान्छौ ।’ जवाफ आयो ।
‘मैले लाने ठाउँ गलत पनि त हुन सक्छ ।’
‘यहाँ जिन्दगी सत्तमार्गमा छैन, ठाउँ सहि वा गलत के फरक पर्छ ।’
खाना सँगै खाने निहुँमा बोलाइएको म, बिमला सहि या गलत छुट्याउने प्रक्रियामा भोकै घर फर्के ।
‘रोज इज विड फाइभ अडर्स इन त्रिसरा ।’ उसको फेसबुक स्टेटस् नोटिफिकेसन् देखे ।
Kooky The Star of Hope